Maraykanka oo ka digay dib u dhac ku yimaada doorashada Golaha shacabka baarlamaanka Soomaliya – SOMALI RADIO ONAIR
Maraykanka oo ka digay dib u dhac ku yimaada doorashada Golaha shacabka baarlamaanka Soomaliya
January 18, 2022 nuxur wararka Uncategorized 0
Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa wadahadal la yeeshay Danjiraha cusub ee Dawlada Mareykanka u qaabilsan Geeska Afrika, ahna kaaliyaha xoghayaha arrimaha dibadda Mareykanka ee Afrika, sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya.
Dhawaan ayay ayahyd markii Maraykanka uu ku hanjabay inuu qaadi doono tallaabooyin ka dhan ah Siyasiyiinta Soomaalida iyo madaxda dawlada Federaalkka hadii mar kale dib loo dhigao doorashada kuraasta Golaha shacabka baarlamanka soomaaliya waxa ugu yeeray qaswadayaasha Soomaaliya haddii doorashada wakhtigeeda lagu qaban waayo.
Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdisaciid Muuse Cali iyo ergayga Geeska Afrika, David Satterfield, waxa ay ka wada hadleen arrimaha labada dal iyo kuwa gobolka, waxaana ay labada dhinacay ka wada hadleen xaalada Siyaasadeed ee xiliigaan ka taagan Soomaaliya .
Dawlada Maraykanka ayaa si gaar isha ugu heysay Xaalada Siyaasdeed ee Soomaaliya gaar’ahaan Arimaha doorashooyinka Soomaaliya kana digtay in mar kale dib loo dhogo doorashooyinka.
Dawlada Soomaaliya oo cambaareeysay weerar khasaare geystay oo ka dhacay Imaaraadka Carabta.
Madaxweynaha Somaaliland oo u Ambabaxay dalka Itoobiya